Khilaaf hareeyay xisbiga MDC - BBC News Somali
Khilaaf hareeyay xisbiga MDC
27 Maarso 2014
Image caption Hoggaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Morgan Tsvangirai
Kaddib markii uu laba jeer oo isku xigta guul daro kala kulmay doorashadii madaxtimo ee ka dhacday Zimbabwe, ayaa qaar ka mid ah xubnaha xisbiga MDC waxaa ay ugu baaqayaan hoggaamiyahooda Morgan Tsvangirai inuu jagada baneeyo.
Tsvangirai, oo maalmihii lasoo dhaafay hadal u jeedinayay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay bartamaha caasimadda Harare, ayaa qiray in xaalad addag ay soo food saartay xisbiga uu madaxda u yahay ee MDC.
Xubno uu ka mid yahay xoghayaha guud ee xisbiga MDC, Tendai Biti, ayaa la rumaysan yahay in ay ka dambeeyaan dalabka ah in uu Tsvangirai kursiga baneeyo.
Mr. Tsvangirai ayaa u sheegay kuwa doonaya in uu xilka ka dego, in weli uusan taasi ku fikirin.
Dadweynaha ku nool caasimada Harare ayaa si weyn u hadal haya khilaafka soo kala dhex galay hoggaanka MDC.
Shakespeare Hamauswa, oo ka faallooda siyaasadda Zimbabzwe, ayaa rumaysan in Tsvangirai uu yahay muuqaalka guud ee xisbiga MDC.
Doorashada soo socota ee Zimbabwe ayaa la qaban doonaa 4 sano kaddib, Madaxweynaha hadda ee dalkaasi, Robert Mugabe ayaa laga yaabaa in xilligaas uu tartami waayo sababo dhanka caafimaadka ah, balse xisbiga MDC ayaa sidoo kale ay dhici kartaa in uu xilligaasi kala jabo haddii aysan xubnaha xisbiga xal u helin khilaafka ka dhex taagan.